Farshaxanada Kubadda Cagta Faransiiska - Sheekooyinka Carruurnimada Hore ee Joogtada ah
Home Tags Wareysiga Faransiiska Football
Tag: Farshaxanada Faransiiska
Ku soo dhowoow Farxadkayaga Farshaxanka Kubadda cagta ee Farshaxanka Carruurta Hordhac Xaqiiqooyinka taariikhda Faransiiska Faransiiska ee haatan iyo hore. Halkan, waxaan soo bandhignay akhristayaasha, guulaha ay ka gaareen labada Ciyaaryahan ee Horyaalka iyo Kubadda Cagta ee Kubadda Cagta ee kubadda cagta.
Xaqiiqdii shaki kuma jiro, France ayaa runtii sameysay kubada cagta iyo taageerayaasha ay ku faanaan. Ciyaartoyda haatan iyo kuwa caadiga ah waxay u qalmaan inay ku jiraan taariikhdeena kubadda cagta.
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Kubadda Cagta isagoo ku naaneeso "Bouba". Waxay si buuxda u daboolaysaa Boubakary Soumare Childhood Story, Taariikh nololeed, Waalid, Qoys ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada buuxda ee Kubadda Cagta Genius oo loogu magac daray "Luffy". Sheekadeena Carruurnimada Lys Mousset Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada oo dhameystiran ee Kubadda Cagta Genius oo sida ugu wanaagsan loogu yaqaan "Neal". Sheekadeena Caruurnimada Neal Maupay Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Buuxda ee Kubadda Cagta Genius oo loogu magac daray "Saint Max". Sheekadeena Carruurnimada oo lagu daro Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Qarin
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee Xiddigta Kubadda Cagta Faransiiska oo loo yaqaan naaneyska "Hunskelper". Sheekadeena Moussa Dembele ee Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qadarin ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada Buuxda ee Kubadda Cagta Genius ee sida wanaagsan loogu yaqaan naaneyska "Luca". Taariikhdeena Lucas Digne ee Carruurnimada oo ay weheliso Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold ...
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekada buuxda ee Kubadda Cagta Genius oo leh "Lenglet". Sheekadeena Caruurta ee Clement Lenglet oo lagu daray Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeedka ee Untold…
LB wuxuu soo bandhigayaa Sheekadda oo dhameystiran oo kubbadda cagta faransiis ah oo lagu naaneeso "LaZoumance". Sheekadeena Carruurnimada Kurt Zouma oo lagu daray Untold Biography Xaqiiqooyin la ...
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta oo leh naanaysta "BenyeGOAL". Our Wissam Ben Yedder Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xogta loo yaqaan 'Biography'